တရုတ်နှင့်မြန်မာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တရုတ်နှင့်မြန်မာ
Posted by eternitymind on Mar 27, 2012 in Creative Writing, Think Different | 29 comments
အခု ဒီ post ကိုရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ ကျွန်မရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို share ချင်ပြီး လူအများရဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ချိန်ဆ ကြည့်ချင်လို့ ပါ။
Facebook မှာလဲ တော်တော်များများ ပြောနေကျပြီး ကျွန်မဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူအတော်များများလဲ ပြောနေကျတဲ့ တရုတ်မကောင်းကြောင်းပါ။ “တရုတ်တွေ နယ်ချဲ. လာတယ် သေနတ်တချက်မပစ်ပဲ.. မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းသွားတယ်” “လုပ်ငန်းရှင်အများစုက တရုတ်လူမျိုးတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်” “မြို.လည်ခေါင်က တိုက်တာတွေကို တရုတ်တွေပဲ ပိုင်နေတယ် “ “နေရာတကာမှာ တရုတ်လူမျိုးတွေ ကြီးစိုးနေတယ်” “ ဒို.မြန်မာတွေ ကျွန်ဖြစ်နေပြီ ..” စသဖြင့် ခဏ ခဏ ကြားနေရပါတယ်
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ တခါတလေမကျေမနပ် ဖြစ်မိပါတယ်။
တကယ်လက်တွေ.ကျကျ စဉ်းစားကြည့်တော့ ဒါတွေကကိုယ်စိုက်ခဲ့တဲ့အသီးကိုယ်ပြန်စားရတာပါပဲ။
တရုတ်လူမျိုးတွေကိုကြည့်ပါ သူတို့ ကြိုးစားကျတယ်။ မပျင်းမရိအလုပ်လုပ်ကျတယ်။ စီးပွားရေးဈေးကွက် အမြင်တွေကို အမြဲ စူးစမ်းနေတယ်။ သူတို့ဆင်းရဲခဲ့ကျတယ် ဒါပေမဲ့ ဆင်းရဲတွင်းက ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ် အခြေခံတွေ ရှိတယ် ။ဆင်းရဲတဲ့တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ချမ်းသာတဲ့တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ အခြေခံ စိတ်ဓါတ်တွေ တော်တော် တူကျတယ်။ အများစု အလုပ်လုပ်ရာမှာ အာရုံ စူးစိုက်မှု ရှိတယ် ။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုတိုးချ.ဲဖို့ အမြဲ စဉ်းစားနေတတ်တယ်။ အဓိက ကတော့ သူတို့ အမျိုးချစ်တယ်၊ အချင်းချင်း ကူညီတတ်တယ်။
တရုတ်တွေက ကျွန်မတို.မြန်မာတွေလက်ခံခဲ့လို့ မြန်မာပြည်ထဲရောက်လာကျတာပါ။ သူတို့အားလုံး ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး ၀င်လာတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ သူတို့အများစုက အလုပ်ကြိုးစားပြီး မြန်မာပြည်ထွက် သယံဇာတတွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချရင်း ကြီးပွားလာတာ များပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေက အားနာတတ်တယ်၊ ယုံလွယ်တယ် ၊ သနားတတ်တယ် ၊ ရသလောက်နဲ့ ရောင့်ရဲတတ်တယ် တနည်းပြောရရင် ရေရှည်ကိုမကြည့်ပဲ အပျင်းကြီးခဲ့ကျတယ် ။ ရှေးရိုးစွဲ တယူသန်မှုလေးတွေ ရှိကျတယ်၊ တကယ် အလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာမှာ မကြိုးစားပဲ တလွဲ ဆံပင်ကောင်း နေမိကျတယ်.. ဒီလိုနဲ့မြန်မာတွေ နောက်ကောက်ကျကျန်ရစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်လူမျိုးတွေက နေရာတော်တော်ဝင်ယူလာတယ်.။
ဒါတွေက တရုတ်တွေ အပြစ်လို့ ကျွန်မ မထင်မိပါဘူး ၊ မခံချင်တော့ဖြစ်မိတာပေါ့ ။ ဒါတွေကို ပြောနေယုံနှင့် ဘာမှ မပြောင်းလဲနိုင်တော့ပါဘူး ။ လက်ခံတတ်ဖို.ပဲ လိုမယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။ဒါကိုလူတိုင်းကို သိစေချင်တာပါ ။ လူဖြူလူမဲမခွဲခြားရေးဆိုတဲ့မူနဲ. ရပ်တည်နေတဲ့ American တွေကို စံထားပြီး ကြည့်သင့်နေပါပြီ ။ အဲ့တော့ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲ ? ကိုယ်ဘာတွေ ပြောင်းလဲသင့်သလဲ ဆိုတာကို တွေ.လာပါတယ် ။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တော်တဲ့လူ နေရရမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်သင့်နေပါပြီ ၊
လူတိုင်းမှာ တန်းတူအခွင့်အရေး ရှိပါတယ် ၊ ဒါကိုလိုချင်ရင် လက်တွေ. ကြိုးစားရပါမယ် ..( ထိုင်အော်နေလို့တော့ မရဘူးပေါ့ ) ။ အခုလို တရုတ်လူမျိုးတွေ ချမ်းသာနေတာက ကျွန်မတို့မမွေးခင် ခေတ်ကတည်းက ကြိုးစားခဲ့ကျလို့ အခု သူတို့ စံစားနေရတာပါ။ ဒါကို လက်ခံရပါမယ်။ သူတို့ကို အားကျရင် သူတို့ထက် ကြိုးစားဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မကျေနပ်ဘူး ထိုင်အော်နေတာထက် အားကျပြီး ကြိုးစားတာက ပိုအကျိုးရှိလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကို ပြောင်းလဲ သင့်ပါတယ်..
ဒီ post က မြန်မာလူမျိုးတွေကို မကောင်းပြောချင်တာမဟုတ်သလို တရုတ်လူမျိုးတွေကို မလိုလားဘူး လိုလားတယ် ဆိုတဲ့ဘောထားတွေလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း အရင်က မှားခဲ့တာတွေ (ကျွန်မ စိတ်ထင် ) ကို သတိပြုမိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ နှင့် ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ အများဆုံးရှိနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုး (နိုင်ငံခြားသား) တွေနှင့် ဥပမာပေးပြီး ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို စိတ်ထင်သလောက် သုံးသပ်ကြည့်မိခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
View all posts by eternitymind →
လက်မထောင်ပြီး ဖတ်ရှု အားပေးသွားပါတယ်ချင့်..
မှန်ပါတယ် ရွှေကြည်လည်း အဲဒီလိုပဲတွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အကျိုးပဲကြည့်ပြီး သူများဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့
လူ့အဖွဲ့အစည်း ထဲကလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့က မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တယ်လေ။
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းဆိုတာလည်း ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်ညံ့လို့ ဆိုပေမယ့် အိမ်နီးချင်းကောင်း အနေနဲ့ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။
ခပ်ထုံထုံ ရိုးရိုးကလေး တစ်ယောက်ကို လည်လွန်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က နှပ်ချနေပြီ လူလည်လုပ်နေပြီဆိုရင်
လူကြီးတွေက မကြိုက်ကြဘူးမဟုတ်လား။ အခုလည်း အဲဒီလိုဖြစ်နေပြီလေ။ နဲနဲပေးများများရအောင်အကြံ ကြီးကြတဲ့
တော်လွန်းသူတွေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ကလေးလိုနှပ်ချနေတယ်လို့ ထင်မိပါရဲ့။ မြန်မာပြည်ဖွား ပေါက်ဖော် တွေကတော့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမို့ မြန်မာနစ်နာအောင်တော့ မလုပ်ဘူးထင်ပါရဲ့ သူတို့တွေရဲ့အရည်အချင်းတွေကို
မြန်မာကောင်းကျိုးအတွက်သုံးနိုင်ပါစေလို့။ မြန်မာတွေကတော့ ဒီထက်ပိုကြိုးစားသင့်တာတော့အမှန်ပါ ရွှေကြည်အပါ
အ၀င်ပေါ့။ ဆွေးနွေးတာမှာ အမှားပါရင် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်
ဟိုတလောက ဂျာနယ်တစောင်မှာ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့တရုတ်ပြည်ကိုသွားတုန်းကပေါ့ဗျာ
တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီ အစိုးရအဖွဲ့က မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့
တရုတ်အစိုးရအဖွဲ့က သူတို့နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီအမည်ခံ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုချပြလေရဲ့
ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုက ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုဘဲဗျ
တရုတ်ပြည်သူလူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုက ဆွေးနွေးပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးရဲ့ဆိုဘဲ
အဲ့ဒိတော့ တရုတ်ပြည်သူလူထုရဲ့ ဦးဆောင်မှုဆိုတာဘယ်မှာရှိနိုင်တော့မှာလဲ ဒါသူ့နိုင်ငံကိစ္စပါ
ကျတော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလျှောက်လှမ်းမှုကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျတော်နို်င်ငံ
ကျတော်တို့လူမျိုး ကျတော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ကြမ္မာကိုကျတော်တို့ဘာသာကျတော်တို့ဘဲဖန်တီးချင်တယ်
အခုလဲ မြစ်ဆုံကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီး ဖိအားပြန်ပေးနေရတာလဲ
အများကြီးပါ မြန်မာလူမျိုးတွေက ကြိုးစားချင်စိတ်နဲကြတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်
နောက်ဆုံးတခုလောက်တော့ပြောချင်တာ ၂၀၀၇ သံဃာလှုပ်ရှားမှုမှာ ဘုံကျောင်းတွေရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့
မြန်မာပြည်ပေါက်တရုတ်လူမျိုးတွေ လက်ရှောင်နေတာကို ကျတော်တိတိကျကျသိခဲ့ရတယ်
ှဒီကွန်မန့်က လှုံ့ဆော်ခြင်းလဲမဟုတ်ပါ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းလဲမဟုတ်ပါ
မရွှေအိ ပြောသလိုပဲ သူပဲကောင်းစားပြီး တစ်ဖက်လူခံစားရတာကျတော့လည်း လွန်ပါတယ်
အီတာနတီမိုင်းရဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး ရေးချင်နေတဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခု ပေါ်လာတယ်။
ကျနော်ကတော့ တရုတ် စစ်စစ်လုံးဝရေမရောပါ ။
အောက်ဗမာပြည်မှာနေသော တရုတ်များသည် များသောအားဖြင့် “မန်ချူး” ခေတ်နှောင်းပိုင်းတရုတ်လူမျိုးဆင်းရဲ ဒုက္ခ အဖြစ်ဆုံးအချိန်မှာရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီး၊အထက်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ တရုတ်တွေကြတော့၊တရုတ်ပြည်ကြီးကိုကွန်မြူနစ်တွေအုပ်ချုပ်လို့ထွက်ပြေးလာတာများတယ်၊
ကျနော့ အမေ၊အမြဲပြောတဲ့စကားတခွန်းရှိတယ် “ ဗမာတွေ ငါတို့ပေါ်ဘယ်လောက်ဘဲမကောင်ပါစေ၊ ဗမာ များရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်တော့မှမမေ့သင့်မမေ့ကောင်းဘူး၊ဒုက္ခရောက်နေတဲ့၊ဒီလောက်များတဲ့တရုတ်တွေကိုလက်ခံထားနိုင်တယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူး၊ငါတို့ တရုတ်တွေဆိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုတာကိုကျနော်အမြဲနှလုံးထဲမှာထားပါတယ်၊ယခုအခါမှာ ဗမာပြည်ကြီးဟာကျနော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့၊ဗမာပြည်ကိုဘယ်မေ့နိုင်မှာလည်း၊ဗမာပြည်ကြီးပြန်ကောင်းလာရင်တော့အရမ်းဝမ်းသာမှာပေါ့။
ဦးနု ခေတ်မှာ တရုတ်ပြည်ကြီးကဗမာပြည်ကို အရမ်းကြည်ညှိုလေးစားတယ်၊တရုတ်-ဗမာနယ်နိမိတ်ဆွဲတဲ့အခါ၊ကချင်ပြည်မှ ချီဖွေလောခေါင်နယ်မြေများနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်မှ ကိုးကန့်အယ်မြေများကိုဗမာပြည်ကိုပေးလိုက်တယ်၊ အဲဒီတုံးက ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တရုတ်တွေ၊တော်တော်များများဟာ ဗမာလိုနေဗမာလိုစား၊ကို့ကိုယ်ကို ဗမာဟုယူဆကြသည်၊ယခုအခါမှာ ယိုးဒယားမှနေတဲ့တရုတ်တွေလိုပေါ့၊ယိုးဒယား ဘုရင်ကိုသစ္စာခံ တယ်၊အရှင်းဆုံးကတော့ Yingluck ဆိုတဲ့ တရုတ်မကြီးတောင် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်နေပြီဘဲ။
ဗိုလ်ရှုမောင်(ဗိုလ်နေဝင်း)ခေတ်မှာ တရုတ် တွေကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့နှိမ်တော့၊တရုတ်တွေလန့်ဖြတ်ပြီး၊အန္တရာယ်ကိုမြင်လာသောကြောင့်ပိုစည်းလုံးလာတယ်ပိုကြိုးစားလာတယ်၊ကိုကိုယ်ကို တရုတ် ဖြစ်မှန်းသတိပြန်ရလာတယ်၊ယခု US တောင်လေးစားလာနေရတဲ့ တရုတ်ကြီးဟာထောင်တက်လာပြီဆိုတော့၊စဉ်းစားသာကြည့်လေ၊ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တရုတ်တွေဘယ်လိုနေမှာလဲ။
ဗိုလ်ရှုမောင်အုပ်စု၏နှစ်ပေါင်း၅၀ကျော်မှောင်မိုက်ညစ်ပတ်သောတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် ဗမာတွေ စာရိတ္တ လုံးဝပျက်ဆီးသွားတယ်၊ တရုတ်တွေရဲ့ ပယောဂ လည်းအများကြီးပါတယ်။
ဥပမာ- တရုတ်များ လုံးဝနေထိုင်သွားလာခွင့်မရှိသော “ဖားကန့်” မှကျောက်စိန်းတလုံးကိုဗမာ့နည်းဗမာ့ဟန်ဖြင့်၊ တရုတ်များကသွားရောက်ဝယ်ယူပြီး၊ ယိုးဒယားပြည်“ဘန်ကောက်”အထိသယ်ယူကာသွားရောက်ရောင်းချသည်ဆိုပါဆို့၊လမ်းခရီးတလျှောက်၊မှိုလိုပေါက်နေတဲ့၊ဂိတ်ပေါင်းစုံဖြတ်သွားရပါသည်၊အဲဒီ ဂိတ်ပေါင်းစုံမှာစောင့်နေတဲ့“ပြည်သူ့ရဲများ” “ပြည်သူ့မျိုးချစ်တပ်မတော်များ” “လဝက” များ၊“စသုံးလုံး”များ၊“ပြည်သူ့ကောင်စီဝင်” “ M I ” များစသဖြင့်……..များအားလုံးသည်၊အဲဒီကျောက်စိမ်းကိုမမြင်ဘဲ၊အိပ်ပျော်နေသည်၊သို့မဟုတ်သေနေသည်တော့မထင်ပါ။
ကျနော် အင်မတန်မှလေးစား တဲ့ ဆရာကြောင်ကြီး မိန့်ဘူးသည့်စကားအရ၊
တကယ်တော့ စစ်သားတွေ အာဏာလုယူပြီးနောက်မှာ၊ဝန်ထမ်းတွေက၎င်းတို့ကိုအကျင့်ပျက်အောင်သင်ပေးလိုက်လို့၊ဗမာပြည်ကြီးပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်တွေ လာဘ် ပေးလို့ ဗမာတွေဆင်းရဲပျက်ဆီးသွားတာလား ၊ဗမာတွေ လာဘ်စားလို့ တရုတ်တွေကြီးပွားတိုးတက်သွားတာလားသွားတာလား ??????????
ကျနော် ရေးဘူး တဲ့ “လာဘ်ပေး၊လာဘ်ယူ၊ဒို့ရန်သူတဲ့???” ပို့စ်လေးကိုဖတ်ချင်ရင်ဖတ်ကြည့်ပါလား။
တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေ ပြောနေ လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်
တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှကောင်းကျိုးမရှိဘူးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
မလေးရှားမှာ ဒီလိုပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်ကွက်တွေနဲ့ ကစားရင်းကနေ
မလေးလူမျိုးတွေက ဒေသခံတရုတ်တွေကို အမြင်စောင်းပြီး
လုယက်/တိုက်ခိုက်/ သတ်ဖြတ် ပေါ့လေ။
အဲသလို လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု့ လျော့ပါးသွားတဲ့အချိန်ကစပြီး
မလေးရှား တိုးတက်လာတာ အခုဆို မြန်မာအလုပ်သမားအများဆုံး သွားလုပ်ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပြီ။
ပြည်ထောင်ငယ်တွေစုထားတဲ့.. မြန်မာနိုင်ငံမှာ. Anti-discrimination law အရေးတကြီးထုတ်ဖို့လိုနေပြီ ထင်မိတယ်…
ပြည်ထောင်စုတိုင်းပြည်မျိုးမှာ.. ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲ.. မျိုးနွယ်စုတွေ.. အစိတ်စိတ်ဖြစ်မဲ့.. အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့.. အတွေးအခေါ်တွေ..များသထက်များ..ပွားသထက်ပွားလာတာကို တွေ့ရလို့ပါ…
.. ဗမာက.. ကချင်..။ ကရင်က.. မွန်..ကယားက..ကရင်နီ.. ၀ကရှမ်း.. ရခိုင်က ချင်း..
မြန်မာက..တရုတ်..။ ကုလားက.. ပအို့…။ ယောကျာ်းက ..မိန်းမ..။ မိန်းမက.. ဂေး စသဖြင့်အပြန်အလှန်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့…
အသား..စကား.. ခွဲလုပ်ကိုင်ပြတာနဲ့.. ထောင်ထဲ..
ဥပဒေအရ.. သက်ရောက်အရေးယူတာ.. ပြင်ပြင်းထန်ထန်.. အရေးယူတာ..ဒါမျိုးဖြစ်ရလိမ့်မယ်..
ဒီစိတ်အခြေခံက.. လူလူချင်းတန်းတူညီမျှတာကို.. အသိအမှတ်မပြုတဲ့.. ယဉ်ကျေးမှု..ဓလေ့ကလာတယ်လို့.. သေချာမိတယ်..။
Anti-discrimination law refers to the law on people’s right to be treated equally. Some countries mandate that in employment, in consumer transactions and in political participation people must be dealt with on an equal basis regardless of sex, race, ethnicity, nationality, sexuality and sometimes religion and political views.
ယူအက်စ်မှာ.. အဲဒီလိုတန်းတူမသတ်မှတ်တာကို… သက်ရောက်အရေးယူတဲ့..ဥပဒေတွေ.. အများးးးးးကြီးထားတယ်..
ကမ္ဘာ့လူမျိုးပေါင်းစုံ.. အေးချမ်းစွာအတူတူနေနိုင်ပြီး.. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကို.. စုပေါင်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်..
Civil Rights Act of 1871, also known as the Ku Klux Klan Act, prohibits ethnic violence against blacks
ကျနော်နားလည်မိသလောက်ကတော့၊ တရုပ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးမှာ တရုတ်လူမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊
တရုတ်နိုင်ငံ တနည်း တရုတ်အစိုးရ တနည်း တရုတ်အစိုးရရဲ့ပေါ်လစီကို အဓိကပြောကြသည်ဟုထင်ပါသည်။
Don Juan Ronald says: ကျနော် အင်မတန်မှလေးစား တဲ့ ဆရာကြောင်ကြီး မိန့်ဘူးသည့်စကားအရ၊
ကျနော့အသဲကိုခိုက်အောင်မှန်ပါသည၊သွေးထွက်အောင်မှန်ပါသည်။……………………… အဲဒီကြောင်ကြီးက ကျနော်ကို ပြောခြင်းမဟုတ်လို့ ယူဆပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤသို့သော စကားမျိုးကို အကျွန်ုပ်မပြောဘူးခြင်းကြောင့်တည်း။ အကယ်၍ နာမည်တူ ကြောင်ကြီးနောက်တယောက် ရှိနေပါက အမည်ပြောင်းရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ (မှတ်ချက်။ ရွာပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုစီနီယာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တအင်တာနက်ထဲ ကြောင်နှစ်ကောင် မညောင်စကောင်းကြောင်း သတိပေးပါသည်။)
တရုတ်တွေကို မမုန်းပါဘူးဗျာ…. နောင်ကြရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်နယ်ဒေသကြီး အသစ်တခု ဖြစ်လာမှာပဲဟာ။ အဲဒီကြမှ သစ်တွေအကုန်ခုတ်၊ တွင်းထွက်သယံဇာတ အကုန်တူး၊ ယန်ဇီ မြစ်ဝါ မြစ်ကြီးမြစ်ငယ်မှန်သမျှ ပိတ်ပြီး ရေကာတာဆောက်မယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံလုပ် ဂျီသရီး ဂျီဖိုး သေနတ်ဟောင်းတွေကို ဈေးကြီးပေး ဝယ်ခိုင်းမယ်။ မဝယ်နိုင်ရင် အကြွေးရောင်းမယ်၊ နောက်မှ သားစဉ်မြေးဆက် ကျွန်ခံဆပ်ခိုင်းမယ်…။ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် သဂျီးက လူမျိုးရေးပါရင် မကြိုက်ဘူး။ ကြောင်ကြီးက တရုတ်မကြိုက်လို့စဒါ…။
I absolutely agree.The same should goes for Muslim people lived in Myanmar for decades as citizen. Regardless of the races, all people should have their basic human rights and there should be protection of minority from government and law. I amapure Myanmar but I cannot stand any discrimination based on race, gender or ethnicity and we should try to be matured and should not blame on unreasonable things and also should not bark at the wrong tree. the real root causes of poverty and underdevelopment in Myanmar are macroeconomics mismanagement coupling with severe isolation / wrongly misled self-reliance concepts (even in disasters like Nargis) that kept the country in suchasituation. We should wake up now as we are lagging behind too far and too late.Government has duty to protect its citizens to go about their biz within the administration of laws and constitution not to be exploited illegally. Regardless of races, or ranks anybody violate the law have to be prosecuted in accordance with existing laws. The real problem is there is no guarantee of rule of law here in myanmar as very old cases like five corpses murder case of Inya Myaing still unsettled yet.
အင်းး…ခင်ဗျားကိုတော့ ဘFR (Foreign Resident) ကတော့တော်တော်ချီးကျူးဦးမှာဘဲ…..
ခံရတဲ့သူတွေ ကြုံနေရတဲ့သူတွေက လက်ရှိခံစားမှု့မှာ မှီတည်ပြီးပြောကြတာဘဲနော
ဒါ့ကြောင့် ( ကိုယ်ချင်းစာ ) ဆိုတဲ့စကားပေါ်ပေါက်လာသလားဘဲ
အမှန်မူရင်းအကြောင်းက တရုပ်တွေရဲ့ စီးပွားတိုးတက်မှု့ကိုမကျေနပ်တာမဟုတ်ကြပါဘူး
ကျုပ်အမြင်ကတော့ ( ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ပါနော )
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရွက်ရှည်ကြီးတွေဖတ်ပြပြီး ဆန့်ကျင်သူတွေက သူတစ်ပါးကောင်းစာတာ
တစ်နေ့ မြန်မာပြည်ကြီးပုံစံတစ်ခုပြောင်းလာရင် အဲ့သည်စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေက
တရုတ်တွေမှာ မြန်မာတွေ အတုယူရမှာ ဇွဲ၊လုံးလ၊ဝီရီယ ကြိုးစားမှု့ဘဲ။ဒါပေမဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မကောင်းလို့နယ်စပ်ဒေသ တွေမှာ တရုတ်တွေ မြန်မာ ပြည်ကို တံခါးမရှိ ဒါးမရှိ ဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒါ မပြောနဲ့ ၇န်ကုန်မြို့ လယ်မှာ တရုတ် စစ်စစ်တွေ တရုတ်ပြည်က ဝင်လာပြီး မြန်မာမှတ်ပုံတင်နဲ့နေပြီး စီးပွားကို အတင်းလုပ်တယ်။တချို့ဆို ငွေတုနဲ့ အဖမ်းခံရတာလဲတွေ့တယ်။တရုတ် ဟာ အတုလုပ်တာ အရမ်းတော်တယ်။မြန်မာ ပိုက်ဆံလောက်တော့ အတုလုပ်ရတာ ပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်။အဲ့ဒါ ရမ်းရေးတာ မှုတ်ဘူး။ကိုယ့်အသိတယောက် ဖြစ်တာ။တရုတ်စစ်စစ်ကြီး။သူတို့နဲ့ အနီးကပ်ပေါင်းဘူးတော့ သူတို့စိတ်ဓာတ်ကို သိတယ်။နောက်ပြီး ရန်ကုန် မှာ အနေ ကြာတဲ့သူတွေသိလိမ့်မယ် ကြေးအိုးထဲမှာ ဘာတွေ ထည့်ရောင်းလဲဆို တာ …စီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘာမဆို လုပ်ဖို့ ဝင်မလေးဘူး။ကိုယ်တွေ့သိလို့ ရေးတာ။ရမ်းရေးတာမှုတ်ဘူး
မြန်မာပြည်ထဲက တရုပ်တွေကို မြန်မာတွေလို့ဘဲမြင်တယ်
ဆိုလိုတာက ခင်ဗျားတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာလို့မထင်ဘဲ လီးလို့ထင်နေတာလားကွ
မင်းတို့က မြန်မာတွေဖြစ်ပြီး လီးဖြစ်နေတာလားကွ
အပေါ်ကဆရာ pyaponthu says: ကိုဟုတ်ဘူးနော်
ကိုအောင်ပုလို ဆဲတတ်ချင်ပါသည်…။ သင်တန်း ပေးမလားကိုအောင်ပု???
ကြေးအိုးထဲမှာ ဘာတွေ ထည့်ရောင်းလဲဆို တာပြောပြပါလား pyaponthu says ရယ်
ဟိုးအရင်က၁၉လမ်းမှာလူ့အသဲတွေကိုကြေးအိုးထဲမှာ ထဲ့ရောင်းတာဆေးရုံကြီးကရင်ခွဲရုံက ကုလားကော ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပါအဖမ်းခံရဘူးတယ်
တရုတ်မကို မြန်မာ အထီးနဲ့ ယူစေလို့ ဥပဒေပြု…
ဒါမှ….ဟိုမရောက် ဒီမရောက်လေးဖြစ်ပြီး စီးပွါးရေးလမ်းကြောင်းဖြောင့်တန်းမှာ…..။
သူကြီးပြောတာလွှဲနေပြီ။ခုဖြစ်နေတာက တရုတ်တွေက မြန်မာတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေတာ။မြန်မာတွေ က ခံဘက်။သူတို့ ချမ်းသာတာတော့ ဘာမှ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။တရုတ်တွေရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က မချမ်းသာရင် သေတာမှကောင်းအုံးမယ်
တဲ.။နောက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ရင် သူများတွေ ထက်ပိုစွန့်စားတယ်။ထောင်မြင်ရာ စွန့် ဖို့ ၀န်မလေးတတ်ဘူး။ဒါကြောင့် နယ်စပ်က ၀န်ထမ်းတွေ ဆို တရုတ်မြင်တာနဲ့ တာကော တာကော ဆိုပြီး ဖြစ်နေတာ အ မြင် တောင်ကပ်တယ်။နောက်ပြီး ကျွန်တော် ဗမာ တွေ က ကိုယ့် လူမျုိုး ကိုစေတနာ မရှိဘူး။မြန်မာ စီး ပွားေ၇း လော မှာ လဒ်စား တာ ကုိဘယ်တရုတ် မှတိုင်တာ မတွေ့ ဖူး သ လောက်ပဲ။ လဒ်ပေး ပြီး လိုချင်တာ ရရင်နှပ်နေတာဘဲ.မြန်မာတွေ ကတော့ တိုင်လိုက်တာမှ နေပြည်တော် ထိလိုက်ရတာနဲ့ ရထားတာနဲ့ တောင်မကာမိဘူး။နောက်တော့ဝန်ထမ်းတွေက ဗမာ အ ချင်းချင်း ဆို ရင်တောင်အ ဆင်မပြေတော့ ဘူး။တရုတ်တွေ ဆို လာထား ဘဲ။နောက်တော့ တရုတ်တွေ ရဲ့ ခိုင်း ဖတ်ဖြစ်မှန်းမ သိဖြစ်လာ ရော။အဲ ဒီတော့ တရုတ်တွေ ရဲ့ အ မြင်မှာ ရှောင်းလောင်းမြန်း ကေး ချန့် တဲ့နယ်
ဖြစ်လာ ရော။အဲ ဒီတော့ တရုတ်တွေက မြန်မာပြည် မှာ ကြီး စိုး လာ ရော။ပြသ နာ က အဲ ဒီမှာ စ တာပဲ။ကောင်းတာ မကောင်းတာကတော့ လူမျိုးတိုင်း ရှိပါတယ်။ တရုတ်ကတော့ လူဦးေ၇ ပိုများတော့ မကောင်းတဲ့ သူ ပိုများ မှာ ပေါ့။လော လော ဆယ်မကောင်းတာကတော့ ကုိယ်တွေ ခံနေရတာတော့ကိုယ့် အ စိုး ရ ညံ့ လို့ပေါ့.
” နယ်စပ်က ၀န်ထမ်းတွေ ဆို တရုတ်မြင်တာနဲ့ တာကော တာကော ဆိုပြီး ဖြစ်နေတာ အ မြင် တောင်ကပ်တယ် ”
” ၀န်ထမ်းတွေက ဗမာ အ ချင်းချင်း ဆို ရင်တောင်အ ဆင်မပြေတော့ ဘူး။တရုတ်တွေ ဆို လာထား ဘဲ ”
ကောင်းတာလား ၊ ဆိုးတာလား ၊
မှန်တာလား ၊ မှားတာလား တော့ ၊ မပြောတတ်ဘူး ။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တရုတ်ဖြစ်ရတာ ၊ မျက်နှာပွင့်တာတော့ အမှန်ပဲ ။
အဘတို့ က ၊ သနား လည်း သနား တတ်တော့ ၊
တစ်ခါတစ်လေ ၊ မတောင်းလည်း ပေးလိုက်တာပါပဲ ။
သနား တာကိုး ။ လစာလေး နှစ်ပြား တစ်ပဲ နှင့် ခမျာများ လုပ်ရရှာတာ ။
ကိုယ့်ကိုသာ တမင်သက်သက်ကြီး လာမရစ်နှင့် ။
ဝန်ထမ်းက မယူရင်တောင် ၊ စေတနာ နှင့်ပေးတာပါ ဆိုပြီး အတင်းထားခဲ့တာ ။
သူတို့မျက်နှာလေး ပျော်သွားတာ ကြည့်ပြီး ကျေနပ်ပါတယ် ။
ပေးစရာရှိရင် အလိုက်သိရုံတင် မကဘူး ကွယ့် ။
တိုင်လေ့ တိုင်ထ မရှိဘူး ကွယ့် ။
အဲဒီတော့ ဝန်ထမ်းတွေက ချစ် ကြတယ် ။
မရှိလို့ မပေးနိုင် ၊ မပေးနိုင်လို့ မရှိ ၊
ပါတ်နေတယ် ထင်တာပဲ ။
ယူတတ်ရင် ၊ ပညာတွေနော် ။
ရီချင်စရာတော့အကောင်းသား..(ဘေးကကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကပိုသိနိုင်ပါတယ်၊အထင်နဲ့ ပြောရင်တော့လွဲချော်နိုင်တတ်ပါတယ်)
သဂျီး ရှင့် ခုလိုပြောပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အခု ကျွန်မပြောချင်တဲ့အထဲမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကို မရည်ရွယ်ပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း အားပေးစကားပြောခြင်းပါ။
ယူအက်စ်မှာလို ဥပဒေတွေထားပြီးဆောင်ရွက်ဖို. ထက် ကိုယ့်စိတ်က လက်ခံနိုင်ဖို့ပထမဆုံး လုပ်သင့်တဲ့အရာလို့ ထင်မိပါတယ်။အဲ့လိုသာဆို မြန်မာနိုင်ငံလဲ တိုးတတ်သင့်တဲ့နေရာတွေ တိုးတတ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ( လူဆိုတာ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ပြန်မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အမှန်ကို မြင်ခဲ့တောင် လက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ပြန်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လက်မခံနိုင်တောင် အပြစ်တင်လွဲချခြင်းက ဘာမှ ကောင်းကျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. အရေးကြီးတာက ကျွန်မတို့အားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ် တာဝန်ယူတတ်ဖို. နှင့် ပြောင်းလဲတတ်ဖို့ပါပဲ)
ကိုနေဒေါင်း ပြောသလို မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဖိအားပေးပြီး လုပ်ခိုင်းလို့ မြစ်ဆုံမှာ အိမ်ခြေယာမဲ့ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် စိတ်မကောင်းပေမဲ့ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ မတတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ ။ဒါက အထက်က အစိုးရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေပါ။ ဒါတွေကို တားမြစ်နိုင်မဲ့ အာဏာမျိုး ၊ အဆင့်မျိုး မှာ ကျွန်မတို့ မရှိကျတဲ့အခါ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဒုက္ခသည် တိုင်းရင်းသားတွေကို စာနာသနားမှု နှင့် ခံပြင်းမှုသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ ကူညီမှုမျိုး မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး ။ ကျွန်မတို့ သာ ကြိုးစားကျမယ်ဆိုရင် ထိရောက်အရေးပါတဲ့ ကူညီမှုမျိုးကို ပေးနိုင်မှာပါ။ ကျွန်မတို့သာ ကြိုးစားကျရင် ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကူညီနိုင်မယ်။ ဒုက္ခမရောက်အောင် တားမြစ်နိုင်မယ့် အာဏာမျိုးရှိလာမယ်။ ဒီအတွေးမျိုးကို အဓိက ပေးချင်တာပါ။
Don Juan Ronald ပြောသလိုပဲ တရုတ်တွေ လာဘ်ပေးလို့ မြန်မာတွေ ဆင်းရဲတာလား၊ မြန်မာတွေ လာဘ်စားလို. တရုတ်တွေ ကြီးပွားတာလား ဆိုတာကို ကျွန်မမသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်တွေ ကြိုးစားလို့ တရုတ်တွေ ကြီးပွားတာပဲ လို့ မြင်မိပါတယ်။
တကယ်လို့သာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေသာ လျော့ပါးသွားရင် မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတတ်လာမယ်လို့တော့ ထင်မိပါတယ်။
အဓိက အကြောင်းရင်း က တရားဥပဒေ ကောင်းကောင်း မစိုးမိုး လို့ပါဘဲ
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်မှောင်မိုက်ညစ်ပတ်သောတပါတီအာဏာရှင်စနစ် အောက်မှာ ဥပဒေ ဆိုတာ အလကားဘဲ။
အကယ်၍ တရားမျှတ သော ဥပဒေ အောက်မှာ တန်းတူ ကြိုးစား ပြီး အားလုံး အမြတ်တော်ခွန်မှန်ကန်စွာကောက်ခံ ၊ ပေးဆောင် ၊ ခဲ့ရင် ၊ ကြီးပွားတယ် ဆင်းရဲ တယ်ဆို လည်း အကောင်သား…
ဒါကြောင့် ဒေါ်စု က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို အဓိက အလေးပေးပြောနေတာပေါ့။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး မရှိ ၊ မျှတ မှု မရှိ ရင် အမေရိကန် က ဟီလာရီ ဆယ်ခါ လာ ရင်လဲ ထူးမှာမဟုတ်ဘူး။
မကွေးတိုင်း စကုမြို့ နယ်တွင် ယခု အခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုပ်နိုင်ငံသို့Gas များပေးပို့ ရန် ပိုက်လိုင်း မြုတ်နှံမှု့ များလာရောက်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။
ထိုကုမ္ပဏီမှ တရုတ်များသည် စကုမြို့ နယ်ရှိကျေးရွာ တစ်ရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး
ကျေးရွာ လူကြီးကို တွေ့ ပို့ တောင်းဆိုက သူတို့ဤ Project ကို လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်း
ထားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေပေးရန် လာရောက်တောင်းဆိုကြောင်းသိရပါသည်။
ကျေးရွာလူကြီးမှ စိတ်ဆိုး၍ ဤကဲ့သို့မိန်းမ မျိုး ဒီရွာမှာ မရှိကြောင်း နောင်အခါ
လာရောက် ပြောဆိုရင် ရိုက်ထုတ်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်မှ ထွက်သွားကြောင်း
ကြောင်း ဒေသခံရွာသားများမှ Myanmar News Now ကို ပြောပြပါသည်။
မြေမြို၍ လူမျိုး မပျောက် လူမြို၍ လူမျိုးပျောက်ဟု နယ်စပ်လ၀က တွင်ချိပ်ဆွဲထားသော
စာတန်းများသည် အလှပလား။ တရုပ်လူမျိုးများ ကို ယခုလို တရားဝင် လူမြိုဖို့ ကြိုးစားမှု ခွင့် ပြုထားသည်မှာဘယ်သူတွေပါလဲ?
ဒီနေရာမှာ အလျှင်သင့်လို့ Niknayman ဘလော့ဂ် က သတင်းလေးတပုဒ်ကို ပြန်လည်
မြန်မာပြည်ရဲ့သဘာဝသစ်ပင်ကြီးတွေထဲက ၀က်သစ်ချပင်အကြောင်း အကျဉ်းချူပ်ပြောရရင် ၀က်သစ်ချပင်(oak tree) ဟာ နွေဦးမှာ အထူးသဖြင့် မေလမှာ သစ်ရွက်တွေ စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ ဆောင်းဦးမှာ အရွက်တွေခြောက်သွားရင်တောင် ကြွေမကျဘဲ အင်မတန်ခိုင်န့် တဲ့ သစ်ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်သစ်ချပင် အခက်လေးတွေကို အိမ်တွေမှာ ကျန်းမာစေတယ် လာဘ်ရွှင်စေတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ဆောင်ထားလေ့ရ်ှိကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သစ်ပင်ကြီးမျိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးတပင်ရဲ့အင်မတန်ကြီးမားလှတဲ့ ပင်စည်အမြစ်ကြီးကို ဒီလဆန်းပိုင်းမှာ တူးဖေါ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့ သော်လည်းဘဲ မြန်မာပြည်ပိုင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရှားပါးတဲ့ ဒီလို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်တည်တံ့နေတဲ့ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးရဲ့ကြီးမားလှတဲ့ ပင်စည်မြစ်ကြီးဟာ ယခုအခါမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သစ်ပင်ကြီးများ သစ်ပင်မြစ်ကြီးများကို ထုထွင်းတဲ့ ပြပွဲမှာ ပြသဖို့ အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ root carving art ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆီမှာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တူးဖေါ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်တွေလက်ထဲကတစ်ဆင့် ရောက်ရှိသွားလို့နေပါတယ်။
ဒီ တရုတ်နိုင်ငံ root carving art ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဌဖြစ်သူ Xu Guqing ပြောတာကတော့ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ မြန်မာပြည်က ၀က်သစ်ချပင်ကြီးရဲ့ပင်စည်မြစ်ကြီးကို သူ့ ရဲ့အလုပ်သက်တမ်း (၃၀) မှာ ပထမဦးဆုံး မြင်တွေ့ ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။
ကိုယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတွေ ကိုယ့်ရဲ့မြေပေါ်ကနေပြီး အခြားသော နိုင်ငံကို ရောက်ရှိကုန်ကြတာ မေးစရာ မေးခွန်းတွေ များပြားစွာရှိပါတယ်။
သစ်ထူးလွင် 3/26/2012 06:20:00 AM ShareThis
တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြသည်၊ ရှိလည်းရှီသင့်သည်။ ငယ်ငယ်တုံးကကြားဘူးနေကြသီချင်းလေးပါ။ တာဝန်မဲ့သူတွေကြောင့် ငါတို့တိုင်းပြည် ကျွန်ထပ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူး။ ငွေတခုကြောင့်ကိုယ့်သိက္ခာကိုချပြီး တိုင်းပြည်ကိုထိုးကျွေးမဲ့ကောင်မျိုးတွေကို မျိုးဖြုတ်ဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့နေပါပြီ။
ကျုးကျော်စစ်တိုက်နေကြပြီ။ကိုယ်ရဲ့အိမ်ခြံမြေ ယာမြေ တွေကိုတရုတ်တွေဈေးကြီးဘယ်လောက်ပေးပေးမရောင်းကြပါနဲ့။
တွေ့လား ခွေးအိုမသား ကြံဖွတ်တွေ မင်တို့ပထွေးတွေ တို့နိုင်ငံက ပစ္စည်းတွေ သယ်ထုပ်နေတာ။ မင်းတို့ပါးစပ်တွေ ဟိုဟာဆို့ထားလို့လား။ မင်းတို့ မျက်လုံးတွေ ဟိုဟာနဲ့ အထိုးခံထားရလို မမြင်တာလာ (တာရိုးကနွား)။ တိုင်းပြည်ကောင်း အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ လိုက်ဖျက်ဆီးနေတယ်။ ဒါမျိုးကြတော့ ဘာတခုမ မလုပ်ကြဘူး။ မင်းတို့ ညီမတွေကို ပါပေးလိုက်ကြ၊။
ဒီသတင်းသေချာရင်တော့ အဲဒီစကားပြန်ရဲ့အိမ်ကိုသာပြန်ခေါ်သွားခိုင်းလိုက်ပါ…ဒါနဲ့ စကားမစပ်ပြောရအုံးမယ်..ရွာထဲမှာ နေပြည်တော်ဘက်ကလို လက်ဖြောင့်လေးခွသမားတွေ မရှိဘူလား…စကားပြန်ရော အရုတ်တွေရော ခွေးအော် ၀က်အော် အော်ပြီး ပြေးအောင်တောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြတော့ဘူလား ရွှေမြန်မာတို့ ရဲ့ …အဲဒါမျိုးမှလေးခွစာ ကျွေးရမှာကွ..ထောင်ထဲသွားရရင်တောင် မျိုးချစ်စိတ်ကိုတော့ပြပြီးသားဖြစ်သွားအုံးမယ်…
ဘာဖြစ်လို့အစိုးရက တရုတ်ကို အားလုံးပေးရတာလဲ။မထူးပါဘူး တရုတ်ကိုဲ အုပ်ချူပ်ခိုင်းလိုက်ပါတော့ ။မြန်မာ ပြည်တော့ တရုတ်တွေယူလို့ အခွန်ဘဲ ကျန်တော့မယ်။
Yes…, I agree with “elino”. That translator should be punished first. So crazy guys…
shwe man thar said…
what the communist animals ….
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တဲ့ဘ၀တွေနဲ့… ဖွံ့ဖြိုးပြီး အနောက်နိုင်ငံဆန်တဲ့ အရာတွေနဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါမှာ… တရုပ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေက ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်… မြန်မာနိုင်ငံလဲ မဖွံ့သေးပေမဲ့ စရိုက်တွေက အင်္ဂလိပ်တွေသင်ပေးသွားတဲ့ စရိုက်တွေအခုလက်ရှိ ကွန့်မန့်ပေးထားတဲ့ သူတွေမှာတွေ့ရတယ်… အဲလိုဖြစ်လာဖို့အခွင့်ကြုံနေတယ်… ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲသာ အဖြေရှာထားကြပါ…
ငွေရရင်ပြီးရော ဆိုပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့စကားပြန်တွေ ပုဆိန်ရိုးလုပ်ခြင်တဲ့ကောင်တွေ
ငွေပေးမယ်ပြောတာဘဲ နင်တို့အိမ်က ဟာမတွေကိုခေါ်ပေးလိုက်ပါလား
အဲ့ဒီစကားပြန်ရဲ့ နာမည်နဲ့ အေဂျင်စီကိုပါဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်
ဒီလိုလုပ်စားနေတဲ့ စကားပြန်တွေအများကြီး ရှိနေပါတယ်
ရိုင်းရိုင်းပြာရရင်တော့ ဟိုဟာအကြီးစားပေါ့ အဲ့ဒီလိုစကားပြန်တွေကိုထိရောက်စွာ အရေးယူသင့်ပါတယ်
May Lwin said…
(စကားပြန် မျိုးမစစ် )အခုတောင် တရုတ်က တိုင်းပြည်တဝက်သိမ်းနေပြီ။
ငွေရရင် ပြီးရောလား။ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှန်း မသိဘူး
သတင်းတွေကလဲ တစ်ခုမှကို သက်သာတာမ၇ှိပါလားဗျာ.. ဟူး………….။ ။
ပြည်ဖျက်ကြံ့ဖွတ်တွေကို တွေ့၇ာသင်္ဂျိုင်း ဓားမဆိုင်းဘဲ အကုန်သတ်ကွာ…။ ။
san san said…
မြန်မာပြည်အုပ်ချူပ်တဲ့သူတွေကို အရမ်းစိတ်ကုန်တယ်။မြန်မာ ပြည်အောက်ခြေလူထုကို မကြည့်ဘူး။ငါတဘို့ထဲကြည့်တယ်။ကုန်ဘီးသုတို့ကတော့ ဘယ်ပူမလဲ။နိုင်ငံတကာမှာ ဘဏ်အကောင့် ရှိပြီးသား ။သေရင် ကျွတ်မဲ့ကောင်တွေ မဟုတ်ဘူး။မြန်မာ အစိုးရ ကိုအရမ်းစိတ်နာတယ်။။
ထိရောက်စွာ…………… ဘယ်သူစလုပ်မှာလဲလို့ မေးလိုက်ချင်တယ်….. လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်…. သူ့လွှဲချ ငါ့လွှဲချမနေကြပါနဲ့ မြန်မာ အမျိုးသားတို့
တစ်ကယ်တော့ တရုတ်ပြည်ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူဦးရေ မမျှဘူးဖြစ်နေပါတယ် . . . အခုချိန်ထိ မိသားတစ်စုမှာ ခလေး တစ်ယောက်ပဲ ယူခွင့်ရှိတယ် . . ဒါကြောင့် သံယံဇာတ လဲ ကြွယ် စားနပ်ရိက္ခာလဲ ပေါတဲ့ ဒီမြန်မာပြည်ကို ၀ါးမြို ချင်နေတာကြာပြီ . . .ဒီတော့ နယ်စပ် မှာ နေထိုင်တဲ့ ပြည်သူများ စီးပွားရေးအရ တရုတ်ကို ဆက်ဆံနေရရင်တောင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို မြို မဲ့ အဆင့်အထိတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ မပေးပါနဲ့ မသမာတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိနေရင်လဲ အင်တာနက်က တစ်ဆင့် သက်သေနဲ့ တစ်ကွ ပြည်သူလူထု သိအောင် တင်ပြပါ . . ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က အထူးကာကွယ်ပေးပါလို့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား တောင်းဆိုပါရစေ . . .
နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ တရုပ်သံရုံးရှေ့ မှာဆန္ဒပြကြမှဖြစ်တော့မယ်။ ဘယ်တိုင်းတပါးမှ အဝင်မခံနိုင်ဘူး။ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူတွေ တရုပ်ပြည်
မှာသွားနေကြပါ။ ဗမာပြည်တော့ ဘယ်သူ့ လက်မှ မရောင်းနိုင်ဘူး။
ဗမာပြည်မှာမွေးပြီး သစ္စာမရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်
တရုတ်ပြည်ကောင်းဘို့ မြန်မာပြည် ပြာပုံ ဖြစ်တော့မယ်။အုပ်ချုပ်သူတွေ ဘာလုပ်နေကြလဲမသိဘူး။ကိုယ်ပြည်တွင်းမှာ တရုတ်တွေ ထင်တိုင်းကြဲတာ ကြည့်နေကြတယ်။
စကားပြန်ဆိုတဲ့ကောင်က မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူးထင်တယ်…. ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင့်ကို အရှင်လတ်လတ် မီးရိူ့သင့်တယ်….. မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒီကောင်ကိုတံလျှင်လျိုပြီး တိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်သင့် တယ်
နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးသိန်းစိန်၊ အထက်နှင့် အောက်လွှတ်တော် လူကြီးမင်းများဆီ တိုင်းကြားပါ။
ကျနော်တို့ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ တင်ပြပေးပါ။
ဦးဆောင်ခေါ်လာသူများကို နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့ အပေါ် သစ္စာဖေါက်မှုဖြင့် တရားစွဲရပါမည်။ အသက်ညှာဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံး သေဒဏ် ပေးသင့်ပါသည်။
သက်သေအထောက်အထားဖြင့် တိုင်ကြားပေးပါရန် ကိုသစ် မှတစ်ဆင့် လေးစားစွာ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ အနာဂါတ်နိုင်ငံတော်လှပဖို့ဆင်းရဲခြင်းကြောင့် ကျေးကျွန်ဖြစ်ရခြင်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့ အပေါ် သစ္စာဖေါက်ခံရ၍ ကျေးကျွန်ဖြစ်ရခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ကျေးကျွန်ဖြစ်ရခြင်းတို့မှ ကင်းဝေးကြစေရန်
အခုအချိန်မှ စပြီး အပြတ်ရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးကို ရှေးရှုလျက်
အုပ်ချုပ်သူတွေကမှ မကောင်းတော့..စောက်တရုတ်က လုပ်ချင်သလိုလုပ်လာပြီပေါ့..အဲဒီ စကားပြန်လုပ်တဲ့ကောင်ကိုလည်း နရင်း၁၆ချက်လောက်တီးပစ်လိုက်ချင်တယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ ရွာလူကြီးကိုတော့ လေးစားမိပါတယ်..